International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Statement of Civil Society Organizations on the Union Peace Convention to be held on 12th January 2016
By 126 Civil Society Organizations Forum
1. Adoption of the framework for political dialogue on 16th December 2015 and announcement of the convening date for Union Peace Convention on 12th January 2016 is an act of negligence of armed conflicts occurring in Northern Shan State and Kachin State.
2. We are seriously concerned that trying to hold political dialogue whileanationwide ceasefire has not been implemented yet and all ethnic armed forces are not included in the talks will bring more harm than benefit.
3. Ceasefire agreements which were revived and signed at various levels since 2011 are, in effect, meaningless; thus needs to solve the question of why tens of thousands of innocent people have been driven into the status of internally displaced persons and refugees.
4. Moreover, it is also necessary to analyze and find out why all ethnic armed revolutionary organizations agreed to the Nationwide Ceasefire Agreement and yet could not sign.
5. Only by striving to tackle the said conditions can mutual respect and trust be raised, leading to political negotiations without misgivings. Only then will the political dialogue become truly supportive towards the establishment of democratic federal union.
6. In addition, we think that changing the concept of political dialogue based onatripartite representation as outlined in the Nationwide Ceasefire Agreement into that ofapentagonal representation weakens the seriousness of the focus upon democracy and ethnic equality issue which is the key to Burma's political problem.
7. Therefore, atatime whenasustained ceasefire that is inclusive of all ethnic armed revolutionary forces is yet to materialize, we, the civil society organizations, call for the postponement of political dialogues, reconsideration of the representation proportions and voting quorums for political negotiations, and mustering suggestions and views of those ethnic armed organizations which have not yet signed the Nationwide Ceasefire Agreement.
1. All Arakan Students and Youth Congress
2. Assistance Association for Political Prisoners – Burma
3. All Kachin Youth Union
4. Backpack Health Workers Team
5. Burma Medical Association
6. Burma Partnership
7. Burmese Women's Union
8. Human Rights Foundation of Monland
9. Karen Human Rights Group
10. Karen Students Network Group
11. Karen Women's Organization
12. Karen Environmental and Social Action Network ( KESAN )
13. Kachin Women's Association – Thailand
14. Lahu Women's Organization
15. Mae Tao Clinic
16. Network for Human Rights Documentation – Burma
17. Network for Democracy and Development
18. Palaung Women's Organization
19. Students and Youth Congress of Burma
20. Tavoyan Women's Union
21. Tavoyan Youth Organization
22. Women's League of Burma
23. Yaung Chi Oo Migrnat Workers' Association
24. Action Committee for Democracy and Development
25. Women's Organization Network ( WON)
26. Union of Karenni State Youth
27. Kachin Peace Network
28. Kachin Women's Peace Network
29. Civil Authorize Negotiate Organization ( C.A.N –Org)
30. Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays – Myanmar ( PFLAG- Myanmar )
31. Kuki Women's Human Rights Organization
32. Youth for Peace Makers
34. Shan Youth Yangon ( SYY )
35. N" Centre for Education and Research Development ( NCERD)
36. Kachin Canadian Association
38. Generation Tree
39. Civil Society Network for Peace – Kachin
40. Green Network Sustainable Environment Group
41. Hands of Unity Group
42. Magway EITI Watch Group
43. ME – Community Development Center
44. Organic Agro and Farmer Affair Development Group
45. Green Future
46. Farmer Union ( Magway Region )
47. Shwe Yae Nanthar Labour Union
48. Chinland Natural Resources Watch Group
49. Mwetaung Area Development Group
50. Our Future Initiative
51. Ayeyawady West Development Organization
52. Kun Gyan Gone Network
53. Community Response Group
54. Kachin State Women Network – KSWN
55. Htoi Gender and Development Foundation
56. Kachin State Women Peace Group
57. Shwe Chan Myay Network
58. Myanmar China Pipeline Watch Committee
59. Myanmar Alliance for Transparence and Accountability ( Mandalay Working Group )
60. Eain Da ( Green Rights Organization ) Shan State
61. Khu Po Kapaw
62. Kachin Refugee Committee – Malaysia
63. Shan Women Development Network ( SWDN – Waimaw)
64. Kachin Women Association _ KWA
65. Kanbawza Health Kindness Association ( Mogaung )
66. Loiyang Bum Development Group
67. Myusha Social Development Network ( Kamaing )
68. Community Work for Kachin
69. Young Kachin Writers' Club ( USA )
70. Kachin Youth Organization
71. Kachin National Youth Organization
72. Ethnic Youth Network
73. Free Thinkers
74. Upper Myanmar Lawyers Network
75. Mandalay Peacekeeping Committee
77. 88 – Rakine Generation Students Democratic Organization
78. 88 Generation Peace and Open Society ( Myeik )
79. Diverse Youth Art Platform
80. Kachin Development Group ( KDG )
81. The Seagull: Human Rights, Peace and Development
82. All Burma Federation of Student Unions
83. Genuine People's Servants ( GPS )
84. Pa-O Youth Organization
85. Metta Development Foundation
86. National Network for Education Reform – NNER
87. Youth Development Network
88. Pace on Peaceful Pluralism
89. Network for Social Development and Peace ( Paung )
90. Mon Young Monks Network ( MYMN)
91. Shan Youth Organization Pinlaung
92. Shan Youth Organization Taunggyi
93. Southern Shan State Youth Network
94. Shwe Gas Movement
95. Social Program Aid for Civil Education ( SPACE ) အဖွဲ့
96. Ta'ang Students and Youth Organization ( TSYO )
97. DEMO အဖွဲ့
98. Equality Myanmar
99. Human Rights Educators Network
100. National Youth Congress
101. Youth Initiative Human Rights
102. Myanmar Lawyers Network
105. လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ရက်
106. ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရေးကွန်ရက် ( MMAN )
108. လွတ်လပ်သောအရှိုချင်းများအင်အားစု ( မကွေးတိုင်း ၊ ငဖဲ )
109. ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ( ကျောက်ဆည် )
111. စိမ်းရောင်စို ( တံတားဦး )
112. လူငယ်ဆရာဝန်များကွန်ယက် ( မြိတ်ခရိုင်)
113. ဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ( ပြင်ဦးလွင်)
116. ယုံကြည်ရာ အသိပညာပြန့်ပွားရေးအသင်း
118. ရှမ်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ
119. ၀ံလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း ( ရခိုင်ပြည် )
120. All Arakan Civil Society Organizations Partnership
121. Paung Ku
122. Yaung Chi Thit
123. ရွှေ ခြံ မြေ ကွန်ယက်
125. AWDO မြစ်အနောက်ဘက်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း (မကွေးတိုင်း၊ မင်းဘူး)
126. Myanmar People's Alliance
1. May Thet Kyaw
2. Thinzar Tun
3. Eait Htoo
4. Theik Soe Aung
5. Kyaw Zin Ko Ko
6. Win Htut Win
7. Aung Myo Myint Myat
8. Aung Naing Aye
9. Ko Moe Lwin ( Middle Shan )
10. ဆလိုင်းဟာလင်းကီး - မင်းတပ်
1. Soe Soe Nwe ( Women League of Burma ), +95 94500 29082
2. Thwin Lin Aung ( Genuine People's Servants GPS), +95 2507 95915
3. Ko Moe ( Myanmar People Alliance ) , + 95 95228446
4. Khin Ohmar ( Burma Partnership ), +66 818840772
5. Ko Kyaw Htin Aung (Union of Karenni Students and Youth), +95 925 0890800
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံအပေါ်အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက်နေ့
၁။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေုးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်ကို အတည်ပြု ချမှတ်လိုက်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ခေါ်ယူရန် ကြေညာခြင်းတို့သည် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်နေသော တိုက်ပွဲများကို လစ်လျူ ရှုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာလွှမ်းခြုံသော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဘဲ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး မပါဝင်သေးသော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပရန် ကြိုးပမ်းခြင်းသည် ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးဖြစ်မည်ကို မိမိတို့မှ အထူးစိုးရိမ်ပူပန်မိသည်။
၃။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ တစ်ကျော့ပြန် ဆွေးနွေး အတည်ပြုလာခဲ့သည့် အဆင့်ဆင့်သော အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ်များသည် လက်တွေ့တွင် အရာမဝင်သဖြင့် ထောင်သောင်းချီသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ရောက်ရှိစေသည်မှာ မည်သည့်အကြောင်းတရားများကြောင့် ဟူသည်ကို ဆန်းစစ်အဖြေရှာရန် လိုအပ်နေသည်။
၄။ ထို့အပြင် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့များအားလုံးအနေဖြင့် သဘောတူခဲ့ပြီးသော်လည်း မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လက်မှတ် မထိုးနိုင်သေးသည်ကို သုံးသပ်အဖြေရှာရန် လိုအပ်ပါသည်။
၅။ အထက်ဖေါ်ပြပါ အခြေအနေများကို ပြုပြင်ရန်ကြိုးစားနိုင်မှသာ အပြန်အလှန်လေးစားမှု ယုံကြည်မှုများ ပိုမို မြင့်မားလာကာ သံသယရှင်းရှင်းဖြင့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်မှသာ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ဦးတည်ပြုလုပ်သော နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ အောင်မြင်ရေးကို ပိုမိုအထောက်အကူပြုစေနိုင်မည်ဟု ရှုမြင်ပါသည်။
၆။ ထို့အပြင် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်တွင်ပါဝင်သည့် သုံးပွင့်ဆိုင် ကိုယ်စားပြုမှုကိုအခြေခံသည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပုံစံမှ ငါးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲပုံစံသို့ ပြောင်းသွားခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးပြဿနာ၏ အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေး ကိစ္စရပ်အပေါ်အလေးထားမှုကို လျော့ကျစေသည်ဟု မိမိတို့ရှုမြင်ပါသည်။
၇။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အင်အားစုများ အားလုံးပါဝင်သော ခိုင်မာသည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အရင်ဦးစွာ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးချိန်တွင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ မပြုလုပ်သေးဘဲ အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းထားရန်၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်မည့် ကိုယ်စားပြု အချိုးအစားများ နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူမည့် ရာခိုင်နှုံးသတ်မှတ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် ဤသို့သုံးသပ်ရာ၌ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်မထိုးသေးသော အဖွဲ့များ၏ အကြံပြုချက်များ၊ အမြင်သဘောထားများ စုစည်းရယူရန် မိမိတို့ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ တိုက်တွန်း တောင်းဆို လိုက်ပါသည်။
၁. ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များအစည်းအရုံး
၂. နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ( မြန်မာနိုင်ငံ)
၄. Backpack Health Workers Team
၅. Burma Medical Association
၉. Karen Human Rights Group
၁၀. Karen Students Network Group
၁၂. ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (ထိုင်းနိုင်ငံ)
၁၆. လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ယက် ( မြန်မာနိုင်ငံ)
၂၂. အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)
၂၅. Women's Organization Network ( WON)
၂၉. Civil Authorize Negotiate Organization (C.A.N –Org)
၃၀. Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays – Myanmar ( PFLAG- Myanmar )
၃၂. Youth for Peace Makers
၃၃. ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ 
၃၄. Shan Youth Yangon ( SYY )
၃၅. N" Centre for Education and Research Development (NCERD)
၃၆. Kachin Canadian Association
၃၈. Generation Tree
၃၉. Civil Society Network for Peace – Kachin
၄၀. Green Network Sustainable Environment Group
၄၁. Hands of Unity Group
၄၂. Magway EITI Watch Group
၄၃. ME – Community Development Center
၄၄. Organic Agro and Farmer Affair Development Group
၄၅. Green Future
၄၆. Farmer Union ( Magway Region )
၄၇. Shwe Yae Nanthar Labour Union
၄၉. Chinland Natural Resources Watch Group
၅၀. Mwetaung Area Development Group
၅၁. ငါတို့အနာဂါတ် ရှေ့ဆောင်
၅၂. Ayeyawady West Development Organization
၅၃. Community Response Group
၅၄. Kachin State Women Network – KSWN
၅၅. Htoi Gender and Development Foundation
၅၆. Kachin State Women Peace Group
၅၇. Shwe Chan Myay Network
၅၈. Myanmar China Pipeline Watch Committee
၅၉. Myanmar Alliance for Transparence and Accountability ( Mandalay Working Group )
၆၀. Eain Da ( Green Rights Organization ) Shan State
၆၁. Khu Po Kapaw
၆၂. Kachin Refugee Committee – Malaysia
၆၃. Shan Women Development Network ( SWDN – Waimaw)
၆၄. Kachin Women Association _ KWA
၆၅. Kanbawza Health Kindness Association ( Mogaung )
၆၆. Loiyang Bum Development Group
၆၇. Myusha Social Development Network ( Kamaing )
၆၈. Community Work for Kachin
၆၉. Young Kachin Writers' Club (USA)
၇၀. Kachin Youth Organization
၇၁. Kachin National Youth Organization
၇၂. Ethnic Youth Network
၇၃. Free Thinkers
၇၄. အထက်မြန်မာပြည် ရှေ့နေကွန်ယက်
၇၅. မန္တလေး ငြိမ်းချမ်းမှုထိမ်းသိမ်းရေးကော်မတီ
၇၈. ၈၈-ရခိုင်မျိုးဆက်များ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
၇၉. ၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ( မြိတ်ခရိုင်)
၈၀. Diverse Youth Art Platform
၈၁. Kachin Development Group (KDG )
၈၂. The Seagull: Human Rights, Peace and Development
၈၃. All Burma Federation of Student Unions
၈၄. Genuine People's Servants (GPS )
၈၅. Pa-O Youth Organization
၈၆. မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်း
၈၇. National Network for Education Reform – NNER
၈၈. Youth Development Network
၈၉. Pace on Peaceful Pluralism
၉၀. Network for Social Development and Peace ( Paung )
၉၁. Mon Young Monks Network ( MYMN)
၉၂. Shan Youth Organization Pinlaung
၉၃. Shan Youth Organization Taunggyi
၉၅. Shwe Gas Movement
၉၆. Social Program Aid for Civil Education ( SPACE ) အဖွဲ့
၉၇. Ta'ang Students and Youth Organization ( TSYO )
၉၈. DEMO အဖွဲ့
၁၀၀.Human Rights Educators Network
၁၀၂. လူငယ်ရှေ့ ဆောင် လူ့ အခွင့်အရေးပညာပေးအဖွဲ့ 
၁၀၃. Myanmar Lawyers Network
၁၀၆. လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ရက်
၁၀၇. ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရေးကွန်ရက် ( MMAN )
၁၀၉. လွတ်လပ်သောအရှိုချင်းများအင်အားစု ( မကွေးတိုင်း ၊ ငဖဲ )
၁၁၀. ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ( ကျောက်ဆည် )
၁၁၂. စိမ်းရောင်စို ( တံတားဦး )
၁၁၃. လူငယ်ဆရာဝန်များကွန်ယက် ( မြိတ်ခရိုင်)
၁၁၄. ဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ( ပြင်ဦးလွင်)
၁၁၇. ယုံကြည်ရာ အသိပညာပြန့်ပွားရေးအသင်း
၁၁၉. ရှမ်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ
၁၂၀. ၀ံလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း ( ရခိုင်ပြည် )
၁၂၁. ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမိတ်ဖက်အဖွဲ့
၁၂၃. ရွှေ ခြံ မြေ ကွန်ယက်
၁၂၄. AWDO မြစ်အနောက်ဘက်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း (မကွေးတိုင်း၊ မင်းဘူး)